Halkee ku dambayndoontaa Khaatumadiisa siyaasadeed ee Raila Odinga?! | puntlandi.com
Halkee ku dambayndoontaa Khaatumadiisa siyaasadeed ee Raila Odinga?!
Sida muuqata Raila Odinga wuxuu maray wadadii Aabihii Jaramogi Oginga Odinga. Raila wuxuu ka soo qaybqaatay halgankii bilawgii 90kii Kenya lagu dimoqoraadiyey, loogana saaray Taliskii Halka Xisbi ee xukunkii Moi. Xabsi ayuu u galay, waana loo jirdilay. Wuxuu kaloo ka soo qaybqaatay horumarinta Dastuurkii 2010ka ee xukun hoos u dejinta Kenya (devolution governance).
Inkastoo uusan u harin cumri siyaasadeed oo badan, Raila waa aabaha mucaaradka siyaasada Kenya. La’aantii siyaasada Kenya xiisada iyo xaraarad iyo macno toona ma lahaateen, horumar iyo isbedelna ma keenteen. Laakiin maanta Imtixaan adag ayuu ku jiraa, waxaa horyaala kala doorasho adag halka uu Khaatumadiisa siyaasadeed dhigi doono.
Buugan hoose oo macnihiisu yahay “Weli Lama Xoroobin” waxaa sanadkii 1969kii qoray Jaramogi Oginga Odinga, Aabaha Raila Odinga. Jaramogi iyo Kenyatta, Madaxweynaha guuleystay Uhuru aabihii waxay ka mid ahaayeen siyaasiyiintii u soo halgamay xoriyad doonka Kenya. Waxay isku noqdeen Madaxweyne iyo ku xigeen, Laakiin markii danbe labo wado ayey kala qaadeen. Mar walba magacyadooda waxay la xariiraan hardanka siyaasadeed ee qowmiyadaha Kenya ka dhex jira.
Markii ay kala leexdeen isaga iyo Kenyatta, oo xisbiga KANU kawada Tirsanaa ayuu Jaramogi Odinga wuxuu halgan u galay abaabul siyaasadeed oo dabaqad iyo aydiloojiyad ku dhisan. Wuxuu aas aasay Xisbiga Shacabka Kenya. Wuxuuna xoogaa saaray Beeralayda iyo dib u habayn lagu sameeyo dhul beereedka, wuxuuna halgan kiisa sal uga dhigay Isbedel Bulshadeed (social transformation), taasoo uu Jaramogi isku deyey in uu dadkiisa iyo dalkiisa kaga talaabiyo siyaasada qabiilka iyo tacasubka ku dhisan, laakiin kuma guulaysan halgankaas.
Dadaal dheer ka dib ayuu dib u milacsaday dadka ku hareeraysan iyo taageerayaasha ka danbeeya. Bidix iyo Midig miduu eegaba waxaa ka fadhiya kuna gaafwareegsan tolkiisa. Halgankii Isbedel Doonka ee Jaramogi wuxuu dhaafi waayey qabiilkiisa Luo. Hagardaamadii uu kala kulmay Isticmaarka, siyaayintii uu loolanka ka dhexeeyey iyo halgankiisii dhicisoobay ayaa keentay in uu qoro buuga ugu magac daray ” Not Yet Uhuru, Weli Lama Xoroobin”. Jaramogi wuxuu ka hadlayey Kenya, laakiin Afrika oo idil inta Qabiilka, Gumaysiga Maskaxda, Xasadka iyo Is lugaynta ka jirto weli ma aysan xoroobin. Afrika way is dhaantaa wayna kala tagtay. Inaga Waxaan ku jirnaa kuwa laga tegay oo weli habsaanka ah ee ma is daba qabanaa??.